Shiinaha 15 Khz Ultrasonic Welding Generator Transducer oo leh Soo-saarista Wax Soosaarka Horn Square Square iyo Warshad | Qianrong
15 Khz Ultrasonic Welding Generator Transducer oo leh Booster Horn Square Molding
Qoondaynta QR-15K QR-20K
Joogtaynta 15Khz 20Khz
Awood 2600w 1500w
Danab 220V 220V
Generator Matooriyaha dhijitaalka ah Matooriyaha dhijitaalka ah
Maaddada Geeska Bir Bir
Cabbirka geeska 120 * 25mm 110 * 20mm
Miisaanka saafiga ah ee geeska 11kgs 5.5kgs
Qiyaasta koronto-dhaliye 250 * 150 * 300mm 250 * 150 * 300mm
Miisaanka saafiga ah ee koronto-dhaliye 6kgs 6kgs
Xirmo Kiis alwaax ah Kiis alwaax ah
Codsiga Alxanka maaskaro tolmo wanaagsan leh Alxanka maaskaro tolmo wanaagsan leh
Xudunta mashiinka dharka tolida ah ee Ultrasonic ayaa toli kara inta badan dharka kuleylka leh. Marka la barbardhigo irbadda caadiga ah iyo tolidda dunta, tolidda Xiinka uma baahna irbad iyo dun, xoog tolidda tolidda, xiritaanka wanaagsan iyo xawaaraha tolidda dhaqsaha leh.
Qalabka mashiinka xijaabka loo yaqaan 'Ultrasonic mask mask' waa isku-darka 15Khz iyo 20Khz transducers ultrasonic, geesaha, madaxyada alxanka birta gaarka ah iyo taageerida korantada gaarka ah ee CNC. Xiinka korantada ee nambar ahaan loo xakameeyo ayaa u rogaya awooda magaalada 20Khz soo noqnoqoshada sare iyo korantada sare ee korantada AC wuxuuna siiyaa transducer-ka ultrasonic. Transducer-ka ultrasonic wuxuu u rogaa tamarta korantada tamar farsamo (ultrasonic). Transducer-ku wuxuu abuuraa ballaarasho markii uu sameeyo dhaqdhaqaaq telescoping jihada dheer, ka dibna wuxuu u gudbiyaa madaxa alxanka geeska. Markaa, madaxa alxanka waa la alxamay.
Marka loo barbardhigo cirbadda cirbadda ee nooca cirbadeynta ah, Xiinka Xiinka aan tolmo lahayn ee tolmo la'aan ayaa leh faa iidooyinka soo socda
1. Isticmaalka alxanka ultrasonic, baabi'inta baahida cirbadda iyo dunta, baabi'inta baahida loo qabo is-beddelka irbadaha ee soo noqnoqda, iyada oo aan kala-goysyada jaban ee tolidda dunta dhaqameed, iyo in si hufan loo jaro oo loo xidho dhar. Tolliinka ayaa sidoo kale door qurxin leh. Xoog xabag xoog leh, waxay ku guuleysan kartaa saameyn aan biyuhu lahayn, soo-saarid cad, saddex-geesood oo saameyn ku leh dusha sare, xawaaraha shaqada ee degdegga ah, saamaynta wax soo saarka wanaagsan, darajo sare iyo qurux badan, tayada la damaanad qaaday.
2. Isticmaalka ultrasonic iyo birta giraangiraha birta qaaska ah, geesaha la xiray ma dillaaci doonaan, ma dhaawici doonaan cidhifyada dharka, mana jiri doonaan wax dillaac ama laablaabasho toona.
3. Wax kululeyn looma baahna inta lagu guda jiro soo saarista oo hawlgal joogto ah ayaa suurtagal ah.
4. Hawlgalku waa mid fudud, mana jiro faraq badan oo u dhexeeya habka hawlgalka mashiinka tolidda, shaqaalaha caadiga ah ee tolashada ayaa ka hawl geli kara.
5. Qiimo jaban, 5 ilaa 6 jeer ka dhakhso badan mishiinada dhaqanka, iyo waxtarka sare.
Hore: Xawaaraha Sare 40Khz gariirka Ultrasonic Rubber Cutting Blade with Digital Generator
Xiga: 20Khz 2000w Ultrasonic Transducer Booster Assembly for Ear Loop Rikation Mashiinka